တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် မှအကောင်းဆုံး တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် Výrobce, dodavatel, vývozce s Factory v Taiwan - တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ်, တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် výrobce, တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် dodavatel, တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် vývozci, တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် vývozce, Taiwan တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ်, တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် továrna, တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် výrobci, တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် Dodavatelé, တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် výrobce, တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် OEM, တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် továrny, တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် výrobci
တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် výrobce, dodavatel, vývozce, továrna Taiwan
လုံခြုံပြီးမဟုတ်တဲ့-အဆိပ် PE ပစ္စည်း,ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံ,အသုံးပြုရလွယ်ကူ.
အဖုံးများအိမ်ပြန်ဘို့သင့်လျော်သောများမှာဤအတစ်ခါသုံး PE ဖိနပ်,ခရီးသွား,ပါတီ,ကား,ဥယျာဉ်တော်,အများဆုံးမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအသုံးပြုမှု.
အဆင်ပြေဒီဇိုင်း:အဆိုပါရေစိုခံမိုဃ်းရွာစေသဖိနပ်အဖုံးများ elastic အဖွင့်ပြီ,နှင့်ပေါင်မြင့်မားသောပြွန်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသူများကကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်’စိုစွတ်သောရတဲ့ထံမှဖိနပ်.
တစ်ခါသုံးဖိနပ်အဖုံးများ PE ပစ္စည်းထားကြပါတယ်ထူခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးသောအရာဖြစ်ပါသည်,အလွယ်တကူအသုံးပြုမှုကိုအပြီးပြင်ဆင်မှုနှင့်မှုကိုစွန့်အဖြစ်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.rain-clothing.com/my/disposable-rain-boots.html
အကောင်းဆုံး တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် တစ်ခါသုံးမိုးဖိနပ် ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊